Ukushayela ngejamu ku-ovini - iresiphi
Ikhekhe elinamakhemikhali i-tea elula futhi elula kakhulu yetiye, ongayilungiselela kalula ekhaya ekhishini. Ubuncane bemikhiqizo nezindleko zesikhathi, kodwa umphumela uhlale umangalisa. Ngaphezu kwalokho, kuyindlela enhle yokunamathisela i-jam, eyasala ingakapheli ekupheleni kwebusika.
Indlela yokupheka i-pie elula nge-jamu lokusajingijolo - iresiphi kuhhavini
ufulawa wekolweni - 510 g;
amaqanda amabili enkukhu;
ushukela ogqamile - 195 g;
isikhwama se-powder baking;
iphakethe elijwayelekile lebhotela noma imajarini;
ucezu oluncane lwesasawoti;
okusajingijolo okujulekile - 260 ml;
Njengesizinda samafutha salesi pie, ungathatha kokubili ibhotela kanye negargarine. Esimweni sesibili, inhlama emkhiqizo oqediwe uyoba denser kancane, kepha ukunambitheka kwe-dessert okuvela kulo akukwenzeki ukukhangisa kancane. Ngakho-ke, wanquma ukusebenzisa i-margarine noma i-oli - kunoma yikuphi, isisekelo samafutha kufanele sibekwe kusengaphambili ezindaweni ezifudumele, ukuze kube lula. Ngemuva kwalokho, uxubane ne-sugar granulated, ugaye ngokucophelela bese uwaxuba kancane. Kwesinye isitsha, hlanganisa ndawonye amaqanda amabili enkukhu, ungeze ucezu kasawoti.
Isigaba esilandelayo sokulungiselela sizoba ukuhlanganiswa kwamaqanda namafutha. Ukuze wenze lokhu, engeza amaqanda ashaywa uye ibhotela elimnandi ezinxenyeni ezincane futhi uqhubeke usebenza njengomxube. Lapho ingxube enkulu esetshenziswayo ihlanganiswa, siqala ukuxoqa inhlama, senezela ufulawa omncane we-sifted ne-powder baking. Inani elishiwo iresiphi lihle kakhulu enhlahleni ephelile ukuwa ngezandla, kodwa isalokhu isithambile kakhulu. Ngemuva kwalokho, gcoba inani le-coma elilodwa lamabhola enhlama ububanzi, njenge-walnut kanye nendawo yehora lamahhala efrijini, emva kokufaka ifilimu. Okunye okuhlolwayo kwandiswa ngaphansi kwefomu elifakwe oyile, ukwakha izinhlangothi eziphansi. Sifaka isikhunta ngomsebenzi osebenzayo ngesikhathi esifanayo esiqandisini, esihlanganiswe nefilimu.
Ngesikhathi esibekiwe, usakaze i-jam ephuzi elimnandi kusuka kuma-raspberries phansi phansi kwenhlama, bese ususa ubuhlalu obubandayo kancane bese uphonsa phezu kwephayi nge-grater, uzame ngokulinganayo ukusabalalisa ama-shavings kuwo wonke umhlaba.
Siqedela ukulungiselela i-pie ngejubisi lokujula ebhavini elifudumele. Umbuso wokushisa lapha uzoba kahle kuma-degrees angu-185. Ngemva kwamaminithi angamashumi amathathu nanhlanu, umkhiqizo uzoba mnandi kakhulu futhi uzokwazi ukuwukhipha kwisidlo. Leli khayi liyakuthanda kakhulu efomini elivele lihlile. Bon appetit!
Iphayi elimnandi ku-kefir ne-jam ku-ovini - iresiphi
ufulawa wekolweni - 355 g;
ushukela granulated - 120 g;
I-kefir - 230 ml;
isipuni sesipuni sesiniga isiphelile;
noma yikuphi ukujula okweqile - 230 ml;
amafutha yemifino ehlanza kahle;
Le pie ilungiselelwe ngezibalo ezintathu, futhi ungathatha noma iyiphi i-jam kuyo, ngisho nesikhala seminyaka esedlule. Siqala ngeqiniso lokuthi i-slaked soda, engeza ekamelweni lokushisa le-kefir bese uvuselela. Ngokushesha siqala ukushaya amaqanda ngoshukela. Okulandelayo, hlanganisa i-yogurt neqanda leqanda, engeza ujamu obukhulu bese uhlunga phakathi kofulawa. Manje kusele ukuxuba inhlama kuze kube semkhakheni we-homogeneity, ubeke esitsheni sokupheka oiled oyiletha kuhhavini elungiselelwe kuhhavini elingu-195 degree ngaphambi kweminye imizuzu engamashumi amane nanhlanu.
Ikhekhe elimnandi elimnandi nelinamafutha lingakhonzwa nje ngoshukela oluyimpuphu noma uma lifiswa, uthathe amaqebelengwane amabili noma amathathu bese ugoqa nganoma yikuphi ukhilimu.
I-Fudge yekhekhe le-Easter
Amakhukhi we-Curd - iresiphi elula
Amakhukhi on a brine kusuka utamatisi
Ikhekhe le-chocolate - iresiphi
I-Glaze - iresiphi
Indlela yokupheka ama-muffin?
I-Patties nama-raspberries kuhhavini
Ikhekhe le-carrot - zokupheka okumnandi kunazo zonke zezimpahla ezigqamile zasekhaya
Amakhekhe ngaphandle kokubhaka ngokushesha - izinguqulo ezisheshayo futhi ezilula zama-dessert ezenziwe ekhaya
Indlela yokupheka i-sotnik nge-cottage ushizi?
UCatherine Zeta-Jones esesitokisini
Le cosplayer yaseRussia "yavusa" i-Internet ngamaqembu akhe amaqhawe ama-movie!
Ingxenye yokwakhiwa kwekamelo
Ikhekhe lamafutha e-cream
U-Jay Lo ujoyine umlingisi we-comedy nesoka elincane
I-Siphon ye-aquarium ngezandla zabo siqu
Kanjani usawoti caviar ekhaya?
Indlela yokwenza ibhola le-Greek?
UChef Beckham, Theron, Prince of Monaco kanye nabanye abahlonishwayo bathi amakhasimende akhe athanda ukudla
Ingubo ye-Fur ene-hood
I-Peach pie ku-multivark
Lotion for isikhumba samafutha
I-Adjika nge-apula - izindlela ezimnandi nezokuqala zokwenza isobho
Lezi zimpondo zidlala ngokushelela izinsimbi zomculo
Indlela yokugoba indawo yokulala - imfundo